Ikhaya » Iivenkile » Izizathu zokuyeka
IZizathu zokuyeka ukulunga
Sesiphi esona sizathu sokuyeka ukutshaya, ukutshisa okanye ukusebenzisa ezinye iimveliso zecuba? Zininzi izizathu zokuyeka. Zonke zilungile. Kwaye awuwedwa.
Fumana uncedo olwenzelwe simahla ukuyeka ukutshaya kunye nelinye icuba wena kunye nosana lwakho.
Phucula impilo yakho
Zininzi izizathu zokuyeka ukutshaya okanye ukusebenzisa ezinye iimveliso zecuba. Ayisiyiyo kuphela ukuyeka imidiza, i-e-cigarettes okanye enye icuba iyayiphucula impilo yakho, inokukunceda uzive ungcono kwaye ikunike amandla angakumbi okuzibandakanya nakweminye imikhwa esempilweni njengokuzilolonga.
Ngelixa abantu abaninzi bexhalabile malunga nokufumana ubunzima emva kokuba beyekile, kubalulekile ukugcina engqondweni zonke izibonelelo zokuyeka ukutshaya okanye enye icuba kunye nokuba wenza malini empilweni yakho ngokuyeka. Kungenxa yokuba ukutshaya zichaphazela umzimba uphela, umzimba wakho uphela uyancedakala.
Ukuba unenkxalabo malunga nokufumana ubunzima, okanye ufuna ukufunda malunga nento yokutya ukuze uyeke ukuthanda kwakho, nazi ezinye iingcebiso ezinokukunceda ukukhusela ukuzuza kwesisindo kunye nokuphucula impilo yakho!
YONDLA UMZIMBA WAKHO NGOKUTYA OKUNEMPILO
Khumbula ukuba ayikokuze uzikhanyele into-imalunga nokondla umzimba wakho ngento ekufuneka eyiyo ngokusemgangathweni. Ukutya okunempilo akunakunceda kuphela ukuthintela ukutyeba, kunokuba mnandi! 1 2
Yitya iziqhamo ezininzi kunye nemifuno.
Cwangcisa ukutya kwakho kunye ne-snack esempilweni ukuze ungaze ulambe ngokwenene. (Kulula kakhulu ukubamba ukutya okungenampilo xa ulambile.)
Yiza noluhlu lwamashwamshwam asempilweni owonwabelayo (umz., Imbewu kajongilanga, iziqhamo, iipopika ezingagutywa, ingqolowa equnqwe ngetshizi, intonga yeseleri nebhotolo yamandongomane).
Sela amanzi amaninzi kwaye unciphise iziselo ngeekhalori ezinje ngotywala, iijusi ezineswekile kunye nesoda.
Jonga ubungakanani besabelo sakho. Ipleyiti yokutya esempilweni2 Apha ngezantsi kunokukunceda ucwangcise ubungakanani besabelo sakho.
Nenjongo yokuba nesiqingatha sesitya sakho sokutya sibe ziziqhamo okanye imifuno, i-1/4 yeplate ibe yiprotheyini (umzekelo, inkukhu, intlanzi ebhakwe, isilili) kunye ne-1/4 yepleyiti ibe yicarb esempilweni efana neetapile okanye irayisi emdaka.
Ukuba une "izinyo elimnandi," thintela idizethi kube kanye ngemini kwaye unciphise ubungakanani be dessert (umzekelo, ikomityi yehafu ye ice cream, ikomityi yehafu yamandongomane exutywe neziqhamo ezomisiweyo kunye neetshiphusi ezimnyama, 6 oz. isiqwenga sesiqhamo esitsha, izikwere ezi-1 zetshokholethi emnyama). Phendla i-intanethi "ngezimvo ezinesondlo."
WUZUZE UMZIMBA WAKHO NGOKUHAMBA YONKE IMIHLA
Umsebenzi owenziwe ngokwasemzimbeni, njengokuhamba, ukusebenza egadini / eyadini, ukukhwela ibhayisikile, ukudanisa, ukuphakamisa iintsimbi, ukwenza umhlakulo, ukuskiya kwilizwe eliswelayo, ukuba ngumkhenkce, kukunceda ngeendlela ezininzi1:
Inceda ukuphucula imeko yakho
Inceda ukukhusela ekufumaneni ubunzima
Igcina amanqanaba eswekile ezantsi ukuthintela isifo seswekile (okanye ukugcina isifo seswekile phantsi kolawulo)
Yenza umzimba womelele
Igcina amathambo akho kunye namalungu esempilweni
Misela injongo yokongeza imizuzu emi-5 eyongezelelweyo yomzimba kwizinto osele uzenza suku ngalunye de ube ufikelela kwiyure ngosuku. Khumbula, ukwenza umthambo kunokuba yiyo nantoni na ekwenza ukuba uhambe ngokwaneleyo ukubila.
KHETHA IMISEBENZI ENGAPHANDLE KOKUTYA UKUZE UKUNCEDE UKULWA NEENKCUKACHA
Ukuziqhelanisa nokusebenzisa icuba — ngakumbi ukutshaya — kunokuba nzima ukuyeka ukutshaya njengecuba ngokwalo. Kuyazama ukutshintsha i-cigarette, i-e-cigarette okanye ipeni yokutya kunye nokutya ukwanelisa loo mkhwa wesandla emlonyeni. Abanye abantu abasebenzisa icuba bakufumanisa kuluncedo ukuhlafuna umququ okanye itshungama engenashukela, okanye benze into entsha ukuze baxakeke zizandla zabo.
Sukuvumela inkxalabo yokufumana iiponti ezimbalwa ezongezelelweyo kukudimaze ekuyekeni. Ngokuyeka awuthathi nje amanyathelo okongeza iminyaka ebomini bakho, uphucula umgangatho wobomi bakho kwaye ugcina abantu abakungqongileyo bekhuselekile kumsi wecuba. Unganqikazi ukuthetha nomboneleli wakho wezempilo ukuba unenkxalabo malunga nokuzuza kwesisindo.
Nazi izibonelelo ezongezelelweyo zokunciphisa umzimba okanye ukugcina ubunzima obunempilo:
I-CDC: Ubunzima beMpilo
I-CDC: Ukutya okunempilo ukuze ufumane ubunzima obusempilweni
Umsi wecuba awunampilo kuye wonke umntu osendlwini yakho. Kodwa kuyingozi ngakumbi kubantwana abanemiphunga yabo isakhulayo nakubantu abanesifuba, umhlaza, iCOPD kunye nesifo sentliziyo. Ngapha koko, ukutshaya kunye nokuvezwa komsi wecuba yenye yezona zinto zixhaphakileyo nezibangela ukuba nesifuba.
Ugqirha Jikelele waseMelika uthi ikhona hayi Inqanaba elingenabungozi lokuvezwa ngumsi wecuba. Nabani na, ukuhlala nomsi otshayayo kufana nokutshaya, nabo. Nokuba ukubhencwa okufutshane kukutshaya okutshaya umntu onefuthe kuye kube neziphumo eziyingozi kwangoko, ezinje ngokwanda komngcipheko wesifo sentliziyo, ukubetha, isifo seswekile kunye nomhlaza wemiphunga.
ZIBONELE ZONKE IINDLELA ZOKUSHAYA UMSI WESEKHONDI KUNGABI KWAKHO NAKUBO OBathandayo
Abantwana neentsana banemiphunga emincinci esakhulayo. Banobungozi obukhulu nangakumbi kwityhefu yomsi etshaywayo.
Xa abantwana bephefumla umsi, kunokubangela iingxaki zempilo ezihlala kubo ubomi babo bonke. Oku kubandakanya iingxaki ezinje nge-asthma, bronchitis, inyumoniya, usulelo lwendlebe rhoqo kunye nokwaliwa.
Kubantu abadala abanesifo se-asthma, i-allergies okanye i-bronchitis, umsi womntu otshayayo wenza ukuba iimpawu zibe mandundu.
Iintsana ezinabazali okanye abanonopheli abatshayayo ziphindwe kabini zokufa ngenxa ye-SIDS.
Izilwanyana zasekhaya eziphefumla umsi womntu otshayayo zinengxaki yokungabikho komzimba, umhlaza kunye neengxaki zemiphunga kunezilwanyana ezihlala kumakhaya angenamsi.
Iziphumo zezeMpilo zokuBhengeza ukungazibandakanyi nomsi wecuba: Ingxelo yoGqirha Jikelele
Usapho lwakho lunokuba sisizathu esikhulu sokukunceda uyeke ukutshaya iisigarethi, i-e-cigarettes okanye ezinye iimveliso zecuba. Bavumele bakukhuthaze kwaye bakuxhase kwimizamo yakho yokuyeka.
Andifuni ukuba iintombi zam ezi-3, umyeni okanye abazukulwana aba-2 kufuneka badlule ekundibukeleni ndibulawa sisifo esoyikekayo, ngendlela eyoyikisayo! Iintsuku ezingama-XNUMX ngaphandle kwecuba kunye neentsuku ezininzi zokuphila ngaphambili! Andikwazi ukonwaba. 🙂
Ukufumanisa ukuba unesifo kunokuba yinto eyoyikisayo yokukukhuthaza ukuba uthathe amanyathelo okuqala enkqubo yokuyeka ukutshaya okanye elinye icuba. Nokuba ukuyeka kunokusiphucula isigulo sakho okanye kukuncede ulawule iimpawu zakho, izibonelelo zempilo zinokufikelela kude.
Xa ndayeka i-17 kwiminyaka eyadlulayo, yayingekokokuqala ndizama ukuyeka, kodwa yayilixesha lokugqibela nelokugqibela. Ukufunyaniswa nje ukuba ndine-bronchitis engapheliyo kunye ne-emphysema kwinqanaba lokuqala, bendisazi ukuba eso sisilumkiso sam sokugqibela. Ndabona ukuba ndinethamsanqa lokuba andixelelwanga ukuba ndinomhlaza wemiphunga.
Khusela iMpilo yaBantwana
Ukuba wena okanye iqabane lakho ukhulelwe okanye ucinga ukukhulelwa, ngoku lixesha elihle lokuyeka ukutshaya. Ukuyeka ukutshaya ngaphambi, ngexesha okanye emva kokukhulelwa yeyona nto ibalaseleyo Isipho onokuthi uzinike wena nosana lwakho.
Kunciphisa ithuba lakho lokukhulelwa kwesisu
Inika umntwana wakho ioksijini engaphezulu, kwanasemva kosuku nje olunye engatshayi
Yenza umngcipheko omncinci wokuba umntwana wakho azalwe kwangoko
Iphucula ithuba lokuba umntwana wakho abuye ekhaya evela esibhedlele kunye nawe
Iyanciphisa iingxaki zokuphefumla, ukuvutha kunye nokugula kwiintsana
Ukunciphisa umngcipheko weSifo sokufa kweNtsana ngesiquphe (i-SIDS), usulelo lwendlebe, isifuba, i-bronchitis kunye ne-pneumonia
Impilo yakho ibalulekile nakumntwana wakho.
Ubisi lwakho lwebele luya kuba sempilweni
Impahla yakho, iinwele kunye nekhaya ziya kunuka kamnandi
Ukutya kwakho kuya kuba mnandi ngakumbi
Uya kuba nemali engaphezulu onokuyichitha kwezinye izinto
Uya kuba namathuba okuba nesifo sentliziyo, ukubetha, umhlaza wemiphunga, isifo esinganyangekiyo semiphunga kunye nezinye izifo ezinxulumene nomsi
Fumana uncedo SIMAHLA elungiselelwe wena ukuyeka ukutshaya okanye elinye icuba kwaye ufumane imivuzo yekhadi lesipho! Tsalela umnxeba I-1-800-QUIT-NAMHLANJE ukusebenza nomqeqeshi oqeqeshiweyo wokuKhulelwa kwaye unokufumana i- $ 20 okanye i- $ 30 ikhadi lesipho kwifowuni nganye egqityiweyo yokucebisa (ukuya kuthi ga kwi-250 yeedola) ngexesha nasemva kokukhulelwa kwakho. Funda ngakumbi kwaye uqalise ukufumana umvuzo.
Hlonipha umntu omthandayo
Ukuphulukana nomntu omthandayo sisizathu esibalulekileyo sokuyeka ukutshaya. Abanye abakufutshane neVermont baye bayeka ukuhlonipha ubomi bomntu obathandayo.
Utata wam usweleke kuyo yonke imiba enxulumene nokutshaya. Umama wam usaphila, kodwa utyando lwentliziyo luvulekile ngenxa yokutshaya kwakhe. Ngelishwa, ndinemicimbi yezempilo enxulumene nokutshaya: i-osteoporosis, iipolyps kwizandi zam zezwi kunye neCOPD. Olu lusuku lwam lokuqala, kwaye ndiziva ndilungile kwaye ndomelele. Ndiyazi ukuba ndingayenza le nto. Ndiyazi ukuba kufanelekile ukuba ndiyenze.
Xa uyeka ukutshaya, ukuphuma okanye ezinye iimveliso zecuba, ayisiyiyo impilo yakho oyigcinayo kuphela. Uyakumangaliswa kukubona onokukwazi ukukwenza xa ungachithi mali kwiigarethi okanye kwi-e-cigarettes, ukuhlafuna icuba, isinemfu okanye ukuhambisa izinto.
Bendihlala nditshaya ipakethi ngosuku, nto leyo yayixabisa kakhulu. Ke xa ndayeka, ndaqala ukubeka i $ 5 ngosuku engqayini ekhitshini lam. Ndiyekile iinyanga ezisi-8 ngoku, ke ndinendawo entle yotshintsho egciniweyo. Ukuba ndenza unyaka wokuyeka, ndithatha intombi yam kwiholide kunye nemali.
Ukulungele ukuthatha inyathelo lokuqala?
Yenza isicwangciso sokuyeka esenziwe ngokwezifiso nge-802Quits namhlanje!